कुर्सीमा बसेर खाना खानु भन्दा भुइँमा बसेर खानुकाे यस्ता छन् फाइदा - ज्ञानविज्ञान
तपाई खाना कुर्सीमा बसेर खानु हुन्छ कि भुइँमा बसेर ? आयुर्वेदले यस्ताे भन्छ । नेपालमा अधिकाँश गाउँमा खाना खाँदा भुइँमा नै बसेर खाने चलन छ । तर शहरिकरण बढ्दै जाँदा भुइँमा बसेर खाने चलन विस्तार हट्दै छ भने डाइनिङ टेवलको चलन बढ्दै गएको छ ।
शहरमा बस्ने अधिकाँश मानिस कुर्सीमा बसेर खाना खान्छन् । कुर्सीमा बसेर खाना खानु आनन्ददायी त हुन्छ तर स्वास्थ्यका लागि यो हानिकारक छ । भुइँमा बसेर सुखासनमा भोजन गर्दा शरीरमा धेरै फाइदा पुग्ने आयुर्वेदमा उल्लेख छ ।
भुइँमा बसेर खानुका यस्ता फाइदाः
१ मोटोपन नहुने
सुखासन अर्थात खुट्टा खुम्च्याएर जमिनमा बस्दा भोजनमा ध्यान बढ्छ । कुर्सीमा बसेर टेवलमा खाना खानु भन्दा भुइँमा बस्दा ध्यान खानापट्टी बढी हुने चिकित्सकहरु समेत स्वीकार्छन् । दिमाग शान्त हुने र खानामा ध्यान लाग्ने हुँदा बढी वा कम खाने समस्या हुँदैन । सन्तुलित भोजन हुँदा मोटो पनको समस्या हुँदैन ।
२ शरीर चचिलो हुन्छ
बसेर खुट्टा खुम्चाउँदा पद्मासन बन्न जान्छ र यसले शरीरका विभिन्न भागलाई लचिलो बनाउन सहयोग गर्छ । तल्लो पिठ्युँ र पेट आसपासका माँसपेसी खुम्चिन्छन् । यसले गर्दा पाचन प्रणालीमा पनि राम्रो प्रभाव पर्छ ।
३ पाचन प्रणालीमा सुधार
जमिनमा बस्दा सुखासनमा बसिन्छ । यो पाचन प्रणालीका लागि राम्रो आसन मानिन्छ । जव तपाइँ खानाका लागि यो आसनमा बस्नु हन्छ पेटमा भएका विभिन्न समस्या कम हुँदै जान्छन् । भुइँमा बसेर खाना खाँदा अलिकति अघि झुकिन्छ । र स्वभाविक रुपमा अघि र पछि गर्दा पेटको मांसपेसी सक्रिय हुन्छ र यसले पेटमा पाचन गर्न सघाउने एसिड वृद्धी गर्छ ।
४ पारिवारलाई नजिक राख्छ
जमिनमा बसेर खाना खाने पुरानो पारिवारिक चलन हो । भुइँमा बसेर सबै सदस्यले खाना खाँदा एक आपसमा निकटता र समझदारी बढ्छ । परिवारसँग नजिक हुन चाहनेहरुले जमिनमा बसेर खाना खानु धेरै प्रभावकारी हुन्छ । बसेर खाना खाँदा मन शान्त हुने हुँदा सौहार्दपूर्ण अवस्था सृजना हुन्छ ।
५ जवान राख्छ
भुइँमा बसेर खाँदा ढाड र अन्य हाड सम्बन्धि समस्या हुँदैन । यसले गर्दा उमेर भन्दा बुढो देखिने समस्या हुँदैन । गलत मुद्रामा बस्दा बेठिक भएका मांसपेसी समेत बसेर खाना खाँदा ठाउँमा आउँछन् ।
६ घुँडा दुख्ने समस्याबाट मुक्ति
बसेर खाना खाँदा घुडा दुख्ने समस्या पनि समाधान हुन्छ । यसले शरीरलाई लचिलो बनाउँछ र जोर्नीहरुलाई पनि सहज तुल्याउँछ ।
यी सवै कारणले कुर्सीमा बसेर खाना खानु भन्दा भुँइमा बसेर खानु धेरै राम्रो हुन्छ ।
यसरी खानुहोस् खाना, जसले स्वस्थ बनाउँछ
हामी किन खाना खान्छौं ? जवाफ अनेक छन् ।पेट भर्नका लागि । भोक मेट्नका लागि । स्वादको लागि । स्वास्थ्यका लागि । खासमा भन्ने हो भने, हामीलाई बाँच्नका लागि खानेकुरा चाहिन्छ । खानाले शरीरलाई आवश्यक पोषण दिन्छ । पोषणले शरीरका कार्य-संचालनमा सहयोग गर्छ ।
तर, हामी स्वास्थ्यका लागि होइन, स्वादको लागि खाना खान्छौं । यसरी स्वादको घनचक्करमा परेपछि हामीले जस्तो खानेकुरा खानुपर्ने हो, त्यस्तो खाँदैनौं । जस्तो खानेकुरा नखानुपर्ने हो, त्यस्तो खान्छौं ।
भनिन्छ नि, विश्वमा जति मानिस खान नपाएर मर्छन्, त्यो भन्दा कैयौं गुना खान नजानेर मर्छन् । अहिले हामीलाई मधुमेहले गाँजेको छ, उच्च रक्तचापले गाँजेको छ, कोलोस्टोरले गाँजेको छ । यी रोगहरु धेरैजसो खानपानकै कारण लागेको हो ।
१. शाकाहारी बन्नुहोस्
२. खाना खान नछोड्नुहोस्
३. थोरै खाना धेरैपटक खानुहोस्
४. प्रशोधन नगरिएका होल फुड खानुहोस्
५. बाहिर खाना खानुभन्दा घरमा बनाउनुहोस्
६. खानाको योजना बनाउनुहोस्
७. मेडिटेरियन खानाहरु खानुहोस्
गि्रल्ड माछा र ताजा सागसब्जी सहित एक गिलास वाइन गि्रसमा सबैभन्दा राम्रो खाना मानिन्छ । मुटुको लागि लाभदायक फ्याट, मिनरल र एन्टिअक्सिडेन्टहरु मेडिटेरियन खानामा पाइन्छ ।
८. प्याकेटको खानेकुरा किन्नु अघि लेवल हेर्नुहोस्
९. क्रन्ची खाजा खानुहोस्
१०. दिमाग लगाएर खानुहोस्
जब तपाई खाना खानको लागि बस्नुहुन्छ तपाईले स्वाद लिएर प्रत्येक गाँस खानुहोस् । किनभने त्यसलाई तपाईले धेरै स्वादिलो मान्नुहुन्छ। खाना खाँदा विस्तारै खानुहोस् । तपाईको मस्तिस्कले तपाईको पेट भरिएको २० मिनेट लाग्छ । यदि तपाईले भोली नै आँउदैन जस्तो गरि धेरै खानुहुन्छ भने त्यसले तपाईलाई असर गर्छ ।
११. पानी धेरै पिउनुहोस्
१२. खाजाहरु आफ्नो झोलामा राख्नुहोस्
१३. ताजा फलफूल नभएमा मात्रै फ्रिजमा राखेको खानेकुरा खानुहोस्
१४. फ्रुट फ्लेवर्ड जुस होइन, ताजा फलफूल रोज्नुहोस्
खानेकुराको प्याकेटमा फ्लेवर लेखिएको छ भने त्यसमा फलफूलको वास्तविक स्वाद होइन त्यसमा फेबि्रकेटेट स्वाद राखिएको भन्ने बुझ्नुपर्छ । वैज्ञानिकहरुले ब्याक्टेरियाको प्रयोग गरेर फ्लेवर निकाल्छन् र त्यसलाई प्राकृतिक भन्न सक्छन् ।
१५. प्रशोधन नगरिएको मासु छान्नुहोस्
तपाईले खानाको लागि मासु किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाई प्रशोधन नगरिएको मासु रोज्नुहोस् । तपाईले मासु किन्दा ससेज, स्टि्रप्स र स्लाइस खोज्नुहुन्छ भने त्यो राम्रो होइन किनभने त्यसमा स्वस्थ पोषणतत्वको सट्टामा सोडियम र पि्रजर्भेटिभ्स पनि थपिएको हुन्छ ।
Don't Miss it यस्ता खानेकुरा खादा शरिरकाे बिकार पर्दाथ हट्छ
Up Next याद गर्नुहाेस् ! कति हानिकारक छ घुर्ने समस्या ? यस्ता छन् यसलाइ समाधान गर्ने उपाय
रक्षा बन्धन के हाे ? रक्षा बन्धन एवम् जनै पूर्णिमा किन मनाइन्छ, जान्नुहाेस्
भाइ र बहिनीबीचको अठोट प्रेमलाई दर्शाउने पर्व हो रक्षाबन्धन । खास गरेर रक्षाबन्धन हिन्दू धर्मावलम्बिहरुले मनाउने एउटा पवित्र पर्व हो…